Sawirro: Aadan Madoobe oo kormeer deg deg ah ku tegay teendhada Afisyoone | Arrimaha Bulshada
Home English News News Sawirro: Aadan Madoobe oo kormeer deg deg ah ku tegay teendhada Afisyoone
Sawirro: Aadan Madoobe oo kormeer deg deg ah ku tegay teendhada Afisyoone
Bulsha:- Guddoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya, Sheekh Aadan Maxamed Nuur (Madoobe) ayaa maanta kormeer deg-deg ah oo indha-indheyn ah ku tagay teendhada Afisyoone.
Guddoomiyaha ayaa mid mid u dul istaagay goobaha loogu tala-galay in ciidamada ammaanka ay ku shaqeeyaan. Guddoomiyaha wuxuu amray in dadka aan lagu xadgudbin lana faray in waajibaadkooda ay u gutaan si hagar la’aan ah.
Kormeerka uu maanta teendhada ku tagay Guddoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa imanaya kadib markii uu xalay kulan deg-deg ah isugu yeeray saraakiisha sare ee ciidamada howlgalka nabad ilaalinta ATMIS.
Shirkaas ayaa looga hadlay xaqiijinta amniga doorashada madaxweynaha Soomaaliya oo la filaayo inay dhacdo maalinta Axada oo ku beegan 15-ka May.
Sheekh Aadan Madoobe ayaa faray saraakiisha iyo taliyeyaasha ugu sareysa ATMIS inay gutaan waajibaadkooda shaqo ee ah mas’uuliyada ka saaran ilaalinta amniga doorashada madaxweynaha Somalia.
Si kastaba, doorashada madaxweynaha ayaa loo ballansan yahay 15-ka bishaan, ayada oo guddiga doorashooyinka ay soo saareen habraaca amniga doorashada madaxweynaha, oo la filaayo inay murashaxiinta madaxweyne ku dhaqmaan.